Iyo wekambani PVC mitambo uriri zviri nani? - China Shijiazhuang Yichen Plastic Floor
Iyo wekambani PVC mitambo uriri zviri nani?
PVC mitambo uriri rudzi uriri dzakabudirira zvikuru mitambo pasi nokushandisa PVC Materials. Zvikuru, zvinonzi zvinoberekwa kwenga unhani unyanzvi kana calendering unhani, extruding kana rokukura unyanzvi, uri kuramba jira substrate, uchishandisa PVC uye co-polymer Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti sezvo huru mbishi zvinhu zvino wedzera filler, plasticizer, stabilizer, colorant nezvimwe ebetsero zvinhu.
Ipapo iyo wekambani PVC mitambo flooring zviri nani? The mitambo flooring pamusoro Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd ane inopenya ruvara, muenzaniso wakajeka uye magadzirirwo, läpinäkyvä rukoko uye yakanaka kuchiitwa antislip, nehana Absorção de Água, etc. The flooring yapfuura rugwaro kudzivirira zvakatikomberedza, munyoro uye Eco -friendly zvigadzirwa. Rinogona kushandiswa nzvimbo Environmental Protection zvinodiwa, akadai yakakwirira motokari nharaunda akafanana chipatara, kukireshi, etc. Uyewo, PVC flooring kuti kugadzwa zviri nyore chaizvo uye yakakodzera. Chete kuzviidza munoenzanisa kongiri, rinogona kuiswa, uye hapana kuva mukuru kusvibiswa ruzha panguva installation.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd., nyanzvi akaigadzira PVC mitambo flooring, ane zvachose unhu kuzvidzora uye mukuru pashure-okutengesa basa, nechokwadi kuti mutengi ose anogamuchira anokwanisa chigadzirwa.
Product Quality vimbiso: zvigadzirwa edu havana ruvara musiyano (chete batch mangé), yeshinda unopinza, lotus shizha unopinza, kuzvimba, gogonera ukobvu, kwakanaka uye nezvimwe kusakwana matambudziko. All Yichen zvigadzirwa vachava kunzi pamwe chitupa vanokwanisa vasati kusiya fekitari. Uyewo garandi nokuda chigadzirwa ndihwo 6 gore (mukuru magumo), 2 makore zvakafanana unhu. (Kunze zvikuru customized zvigadzirwa uye unhu rutapudzo anokonzerwa kushandiswa, kugadzwa, murombo yokuzvigadzirisa.)
Main zvibereko Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd: purasitiki paburiro, PVC flooring, mitambo flooring, UV yaitevedzana flooring, homogeneous nezvimwewo flooring. zvigadzirwa dzedu hadzina chete akagamuchira mudzimba kumusika, asi oversea pamusika. Yichen uriri ane mukurumbira wakanaka kwazvo uye nokutenda uye pamwe zvakanaka zvedu mudzimba uye mhiri kwemakungwa nemakasitoma pamusoro chigadzirwa unhu, basa uye pashure-okutengesa basa, etc